श्री’मानबाट काम हुदैन् भन्ने थाहा पाएपछि मैले भाईसँगबाट सु’टुक्क ब’च्चा बनाए, तर ब’च्चामा केही असर पर्छ की ? – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठरोचकश्री’मानबाट काम हुदैन् भन्ने थाहा पाएपछि मैले भाईसँगबाट सु’टुक्क ब’च्चा बनाए, तर ब’च्चामा केही असर पर्छ की ?
श्री’मानबाट काम हुदैन् भन्ने थाहा पाएपछि मैले भाईसँगबाट सु’टुक्क ब’च्चा बनाए, तर ब’च्चामा केही असर पर्छ की ?
डाक्टर साब म ३७ बर्षीय बिबाहित युवती हुँ । सन्तानको रहर हामी दुवैमा औधी छ । बिबाह भएको १० बर्ष बित्यो । ब’च्चा नभएपछि श्रीमान् र मेरो दुवैको परिक्षण गर्दा श्रीमानको पक्षबाट पूर्ण रुपमा काम नगर्ने थहाँ भयो । यो कुरा डाक्टरले मलाई मात्र भन्नु भएको थियो । उहाँलाई औषधिले ठिक हुन्छ रे भनिदिए । त्यसपछि मैले त्यो थाहा पाएपछि आफ्नै भाईसँग सम्बन्ध राखेर ब’च्चा बनाए । पछि अनुहार फरक नआओस् र श्रीमानको परिवारले शंका नगरुन भनेर मेरो बुद्धिले यसो गरेकी हुँ । ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’*****,
तर हाडनातामा ब’च्चा रहे सन्तान राम्रो नहुँने सुनेकी छु । मेरो भावी सन्तानमा केही समस्या आँउछकी भन्ने डर धेरै छ । क्रिपया जिज्ञासा मेटाईदिनुहोला । तपाईले अहिलेसम्म आएका भन्दा अत्यन्तै अनौठो र फरक खालको समस्या राख्नुभयो । यो विज्ञानसँग जोडिएको विषय हो । तपाईले के जान्न जरुरी छ भने स्वास्थ्य विज्ञानले एउटै गोत्रमा समेत विवाह गर्दा सन्तानमा देखिने असर औल्याएको छ । यही का’रण धार्मिक रुपमा नै एउटै गोत्रमा बिबाह निषेध गरिएको हो ।